अटो(Auto) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
विश्वका ठूला अटोमोवाइल उद्योगको ध्यान विद्युतीय गाडीमा, कसको के योजना ?
काठमाण्डौ । विश्वभरका अटोमोवाइल कम्पनीहरु इलेक्ट्रोफिकेशनको दिशातर्फ अगाडि बढिरहेका छन् । कम्पनीहरुले विश्वबजारका लागि आफ्नो रणनीति तयार गरेका छन् । हालै जारी एक रिपोर्टमा भनिएको छ कि विश्वका ठूला अटोमोवाइल कम्पनीहरु: टोयोटा, मर्सिडिज बेञ्ज, बिएमडब्ल्यू, हुण्डाई, होण्डा आदिले सन् २०२० देखि २०३० सम्ममा विद्युतीय गाडी उत्पादनका लागि...
भोक्सबेगनले बाँदरमाथि निर्मम परीक्षण गरेको खुलासा, असुरक्षित गाडीको नेपालमा खुलेआम बिक्री
काठमाण्डौ । विश्वकै एक चर्चित कार कम्पनीले यस्तो काम गरिदिएको छ, जसका कारण सो कम्पनीको अहिले विश्वभर बदनामी भइरहेको छ । जर्मनीको कार कम्पनी भोक्सबेगन(Volkswagen) लगातार फेरि एकपटक मिडियाहरुमा छाइरहेको छ र योपटक कम्पनीको एउटा स्क्याण्डलका कारण यस्तो भएको हो । यसअघि यो कम्पनीमाथि विश्वका कयौं शहरमा निकै ठूलो जरीवाना गरिएको थियो, कारण उसले...
ग्वार्कोमा यामाहाको नयाँ शोरुम
काठमाण्डौ । नेपालका लागि यामाहा ब्राण्डका मोटरसाइकल तथा स्कुटरको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजले ललितपुरको ग्वार्कोमा नयाँ सोरुम सुरु गरेको छ । यामाहाको पुरानो डिलर रिसिक अटोमोबाइल्सले एक्सचेन्ज र फाइनान्स सुविधासहितको सेल्स आउटलेट सुरु गरेको हो । ललितपुर जिल्लमा यामाहा मोटरसाइकल तथा स्कुटरको बढ्दो मागलाई...
महिन्द्रा टु–ह्वीलरको केयर क्लब, ग्राहकलाई सुविधै सुविधा
काठमाण्डौ । नेपालको लागि महिन्द्रा टु ह्वीलहरुको आधिकारिक बिक्रेता अग्नि मोटो इन्कले हालै महिन्द्रा टु ह्वीलर केयर क्लव अन्तर्गत विशेष सुविधा एवम् छुटको व्यवस्था मिलाएको छ। यो सुविधा माघ १७ गतेदेखि सुचारु गरिएको छ । साथै, यस अवसरमा माघ १७ गतेदेखि माघ १९ गतेसम्म ३ दिनका लागि काठमाडौँ, सामाखुसीको सर्भिस सेन्टरमा फ्रि सर्भिसिङ्गको साथै...
मारुतीसुजुकीले पहिलो इलेक्ट्रिक कारको झलक देखाउने, २०२० देखि बजारमा
काठमाण्डौ । अटोमेकर कम्पनी मारुती सुजुकीले भारतमा हुन लागेको अटो एक्स्पोमा आफ्नो पहिलो इलेक्ट्रिक कारको झलक देखाउने घोषणा गरेको छ । कम्पनीको तर्फबाट घोषित आफ्नो पहिलो इलेक्ट्रिक कार, ई–सर्वाइभरको कन्सेप्ट मोडललाई फेब्रुअरीमा हुने दिल्ली अटो एक्स्पोमा सोकेश गरिनेछ । यो एक ओपेन टपवाला दुईसिटे एसयूभी कार हो । यसलाई फ्यूचर अफ रोडर...
एमएडब्लु अर्थमुभर्स जेसीबीको नं १ डिलर बन्न सफल
काठमाण्डौ । एमएडब्लु अर्थमुभर्स प्रालि जेसीबी इण्डिया लिमिटेडको नं १ डिलर बन्न सफल भएको छ । सन् २०१७ मा सबैभन्दा बढी जेसीबीका निर्माण उपकहरणहरुको बिक्री गरेर एमएडब्लु अर्थमुभर्स नं १ डिलर बनेको हो । गएको एक वर्षमा एमएडब्लुले दुईहजार एकसय ४० वटा जेसीबी ब्रान्डका निर्माण उपकरणको बिक्री गरेको थियो । यो उपलब्धीसँगै एमएडब्लु...
यो वर्ष मारुती सुजुकीले धूम मच्चाइदिने, कारका यी ४ शानदार मोडल उतार्दै
काठमाण्डौ । भारतको सबैभन्दा ठूलो कार कम्पनी मारुती सुजुकीले यो वर्षभित्र अटो उद्योगमै धमाका मच्चाउने तयारी गरेको छ । कम्पनीले निकट भविष्यमै भारतमा हुने अटो एक्स्पोमा केही धमाकेदार मोडल र फ्यूचर कन्सेप्ट समेत प्रस्तुत गर्दैछ, जसले अटो क्षेत्रमै हलचल मच्चाइदिनसक्ने दाबी गरिएको छ । अटो एक्स्पो आगामी ९ देखि ११ फेब्रुअरीमा भारतमा...
सुजुकी सेलेरियोको धुमचक्कर
काठमाण्डौ । सुजुकीका चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता तथा सीजी होल्डिङ्गको अटोमोटिभ डिभिजन सीजी मोटोकर्पल पौष महिनादेखि राष्ट्रब्यापी संचालन गरेको सुजुकी सेलेरियो टेष्ट राइड क्याम्पेनलाई निरन्तरता दिदैं आएको छ । उपभोक्तालाई खरिद निर्णय लिनुपूर्ण पहिलो अनुभव तथा सन्तुष्टि प्रदान गर्ने सोचका साथ कम्पनीले...
सकियो महिन्द्राको फ्री सर्भिस क्याम्प
काठमाण्डौ । नेपालका लागि महिन्द्रा गाडीहरुको आधिकारिक बिक्रेता अग्नि ग्रुपअन्तर्गत बालाजू अटो वक्र्सले पुस २४ गतेबाट महिन्द्रा फोर ह्वील गाडीहरुका लागि नेपालभरका कम्पनीका आधिकारिक वर्कसपहरुबाट एकैसाथ फ्रि सर्भिसिङ्गको व्यवस्था थियो । सो मेला सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । सो क्याम्प यही पुस महिनाको २४ देखि २८ गतेसम्म सञ्चालन...
यामाहाले एफजी२५ राइडर्सका लागि पहिलो पटक आयोजना गर्यो एड्भेन्चरस र रोमाञ्चक ‘राइड आउट’
काठमाण्डौ । नेपालका लागि यामाहा मोटरसाइकल तथा स्कुटरको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजले आफ्नो उत्पादन यामाहा एफजी२५ का राइडरहरुका लागि पहिलोपटक ‘एड्भेन्चरस’ तथा रोमाञ्चक ‘राइड आउट’ आयोजना गरेको छ । ‘सँगै हाँकौं, सम्बन्ध झन् बलियो बनाऔं,’ नारा रहेको यो राइड काठमाडौंस्थित जेनेसिस क्याफेबाट सुरु भएर प्राकृतिक...
सुजुकीको नयाँ वर्ष अफर, छुट र बोनसको बहार
काठमाण्डाौ । सुजुकीको चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको नेपालको लागि आधिकारिक बिक्रेता तथा सीजी होल्डिङको अटोमोटिभ डिभिजन सीजी मोटोकर्पले नयाँ वर्ष २०१८ योजना अन्तर्गत “दिस् ऐर गिफ्ट योर सेल्फ अ सुजुकी” अफर ल्याएको छ । सुजुकी ब्राण्डका चार पाङ्ग्रे अन्तर्गत देशकै सर्वाधिक कार रेञ्जहरु उपलब्ध छन् । कम्पनीद्वारा नेपाली बजारमा उपलब्ध...
चीनले बनायो गज्जबको इलेक्ट्रिक कार, विश्वभर तहल्का मच्चिने विश्वास
काठमाण्डौ । चीनको स्टार्टअप बाइटनले आफ्नो भिजन अटोमोवाइलको फ्यूचरलाई सोकेस गरेको छ । कम्पनीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ कि इन्ट्यूटिव तथा इन्टेलिजेन्ट कारलाई आगामी वर्षसम्म ग्लोबल मार्केटमा लगभग ४५ हजार डलरमा बिक्री गर्न सुरु गरिनेछ । यो इलेक्ट्रिक अवधारणाको कारको बाइटनले अमेरिकाको लसभेगसमा जारी कन्ज्युमर इलेक्ट्रोनिक...
महिन्द्राको फ्री मेघा सर्भिस क्याम्प
काठमाण्डौ । नेपालका लागि महिन्द्रा गाडीहरुको आधिकारिक बिक्रेता अग्नि ग्रुप अन्तर्गत बालाजू अटोवर्कसले आइतबारदेखि महिन्द्रा फोर ह्वील गाडीहरुका लागि नेपाल अधिराज्यभर रहेका कम्पनीका आधिकारिक वर्कसपहरुबाट एकैसाथ फ्रि सर्भिसिङ्गको व्यवस्था मिलाएको छ । महिन्द्रा फ्रि मेगा सर्भिस क्याम्प योजना यही पुस महिनाको २४ देखि २८ गतेसम्म...
समृद्धिका लागि व्यवसायीको तयारी:जेसीबी मेसिन अब २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमै उपलब्ध
काठमाण्डौ । नेपालका लागि जेसीबी निर्माण तथा हेभि इक्विपमेन्टको एमएडब्लु अर्थमुभर्स प्रा. लि.ले जेसीबी मेसिन खरिदका लागि अभुतपूर्व डाउन पेमेन्टको योजना सार्वजनिक गरेको छ । अब ग्राहकले मात्र २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा जेसीबी ब्रान्डका मेसिन खरिद गर्न पाउनेछन्, जुन नेपालमै पहिलो पटक हो । जेसीबीको नयाँ अफरमा एनसीसी बैंक लिमिटेडको साथ...